Họrọ 15 "Macbook Pro SSD n'ụzọ amamihe dị ka ha anaghị anọchi anya | M si Mac
Họrọ 15 ″ Macbook Pro SSD nke amamihe dịka ha anaghị edochi anya
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacBook Pro, ọtụtụ
Kwa mgbe anyị na-ahụ kọmputa kọmputa Mac nwere ọghọm nke imechi maka mgbanwe ma ọ bụ dochie akụkụ ngwaike. Generalnata akụrụngwa na akụkụ ya belatara na-egosi na disassembly nke akụrụngwa bụ mgbagwoju anya. Oge nke a bụ oge nke 15 ″ Macbook Pro na dị ka anyị na-agụ na forums dị iche iche, na-eme ka ọ ghara ikwe omume iji dochie diski SSD.
Apple ekpebie ịchụ mgbanwe mgbanwe diski SSD maka ọhụụ OLED ọhụrụ na otu ndị a. Ya mere, anyị ga gbakọọ ego nke ebe nchekwa iji dị ka n'ụzọ ziri ezi dị ka o kwere, ka ọ ghara ịda, ma ọ bụ na anyị ga-amalite mpụga diski.
Dị ka ụfọdụ ndị ọrụ si kọọ, ezughị ohere fọdụrụ na motherboard iji wepu diski nchekwa na nsụgharị ya na Touch Bar. Ndị ọrụ ndị ọzọ na-egosi ihe yiri nke ahụ na kọmpụta ndị pere mpe, ndị 13 ″, mana na nsụgharị ya na Touch Bar.
Ihe niile dị ka ọ na-egosi na nnabata nke Ọhụrụ OLED mmanya, na-egbochi ohere nke akụrụngwa ọhụrụ nke na ọ na-egbochi nnọchi nke ncheta nchekwa. N'aka nke ọzọ, nke a anaghị eme na ọkwa ọhụrụ Macbook Pro ma ọ bụ na-enweghị Touch Bar, nke yiri ka a ga-edochi ya.
Ọ bụrụ na ekwenye na echetara ncheta SSD na motherboard, ọ ga-abụ Mac mbụ nwere ebe nchekwa SSD soldered kemgbe 12 ″ Macbook. Ya mere, Anyị ga-ahọrọ ikike anyị chọrọ, ma ọ bụrụ 512 Gb ma ọ bụ 2 Tb, n'ihi na anyị enweghị ike ịgbasa ya. Agbanyeghị, ka anyị chee echiche banyere mmetụta ndị ọzọ, ọbụlagodi mkpa dị mkpa: akwụkwọ nchekwa na ngwa ndị a, ebe ọ bụ na ọdịda na diski ahụ na-apụta ọnwụ nke ozi nwere nnukwu ihe puru omume.
Ọ bụ eziokwu na echiche mbụ m nwetara mgbe m nwere Macbook ọhụrụ ahụ n'aka m (enwere m 13 ″ n'aka m) bụ na anyị na-ahụ kọmputa dị nro na vasatail, anyị ga-enyocha ma njirimara ndị a ọ ga-akwụ anyị ụgwọ maka ntụgharị ahụ. nke otu ndị na-ahazi ahazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Họrọ 15 ″ Macbook Pro SSD nke amamihe dịka ha anaghị edochi anya
Nkem M. dijo
Echere m na ihe isiokwu ahụ na-ezo aka bụ na ihe kachasị echegbu onwe ya bụ na ọ bụrụ na motherboard ma ọ bụ ike ọkọnọ ada ada, ọ gaghị ekwe omume iwepu data ahụ na diski SSD, ọbụlagodi ọdịda nchekwa RAM nke na-eme ka ọ ghara ikwe omume buut arụ ọrụ ma ọ bụ usoro mgbake.
Nke a dị oke njọ na otu ndị ọkachamara, a na-eji akwụkwọ nkwado ndabere oge niile n'ihi mkpa data a na-ejikwa, mana enweghị obi abụọ na ọ bụ nkọwa dị mkpa, onye ọ bụla nọ na kọmputa maka oge mara na n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ emesia anyị ga-ahụta ụdị ọnọdụ dị otu a. Ugbu a iji gwụ nke ịnweta data enwere ọtụtụ isi ihe ndị ọzọ nke ọdịda karịa SSD.
Ka ha gara n'ihu otu a n'ime afọ ole na ole, Macbook Pro ga-abụ otu ihe ahụ dị ka iPad Pro, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ afọ, ọsọ ọsọ nke ihe niile gbanwere ma ọ bụ na enwere onye na-amaghị nke ọma ntụziaka a ga-ewere. Ọ bụ ihe ezi uche dị na inwe ahịrị MacBook Ikuku na MacBook?
Zaghachi Fran M
Apple na-ewe naanị akwụkwọ akụkọ ahụ "808"
Shazam na-eme ka igwe okwu rụọ ọrụ mgbe niile na Mac anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị mechie ngwa ahụ